ဝင်းနှင့်ဇော် အတွက် ထိုင်းဘုရင်ဆီ မြန်မာအစိုးရ အသနားခံစာ တင်မယ် - MM Live News
သဒေဏျကခြံ မွနျမာလူငယျ ၂ ဦးအတှကျ မွနျမာအစိုးရက ထိုငျးဘုရငျထံ မတ်ေတာရပျခံမညျ
လိပျကြှနျးလူသတျမှုကွောငျ့ သဒေဏျကခြံနရေတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသား နှဈဦး လှတျမွောကျဖို့ အတှကျ ထိုငျးဘုရငျထံ မတ်ေတာရပျခံ တောငျးဆိုသှားမယျလို့ အလုပျသမား လူဝနျမှုကွီးကွပျရေးနဲ့ ပွညျသူ့အငျအားဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးသိနျးဆှကေ ပွောပါတယျ။
“ထိုငျးဘုရငျမငျးမွတျဆီကို အသနားခံစာ တငျပွဖို့ ရှိပါတယျ။ ထိုငျးမှာရှိတဲ့ လူမှုအဖှဲ့အစညျးကလညျး ဆောငျရှကျဖို့ စီစဉျနပေါတယျ။ သတျမှတျတဲ့ နညျးလမျးနဲ့အညီ ဆကျလကျဆောငျရှကျပေးသှားဖို့ ရှိပါတယျ။”
ဒီနနေ့ပွေညျတျောမှာရှိတဲ့ အလုပျသမားလူဝနျမှုကွီးကွပျရေးနဲ့ ပွညျသူ့အငျအားဝနျကွီးဌာန ရုံးမှာကငျြးပတဲ့ အလုပျသမားရေးရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးလုပျငနျးကျောမတီ အစညျးအဝေး အပွီး ဖွကွေားခဲ့တာပါ။
ထိုငျးနိုငျငံတောငျပိုငျး လိပျကြှနျးမှာ ဗွိတိနျနိုငျငံသား ၂ ဦး အသတျခံရတာနဲ့ပတျသကျပွီး ‌သဒေဏျကခြံနရေတဲ့ ကိုဇျောလငျးနဲ့ ကိုဝငျးဇျောထှနျးတို့ လှတျမွောကျရေးအတှငျ မွနျမာအစိုးရ အနနေဲ့ အရငျကလညျး လုပျဆောငျပေးနသေလို အခုလညျး ဆကျလကျ ဆောငျရှကျပေးသှားမယျလို့ လညျး ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးသိနျးဆှကေ ပွောပါတယျ။
“စဖွဈကတညျးကိုက နိုငျငံတျောအကွီးအကဲမြားကိုယျတိုငျ ညှနျကွားခကျြရှိပါတယျ။ ဌာနကလညျးပဲ အလုပျသမားသံအရာရှိတှေ ထိုငျးနိုငျငံမှာရှိတဲ့ သံအမတျကွီးတှေ ထိုငျးနိုငျငံမှာရှိတဲ့ အလုပျသမားရေးရာ အဖှဲ့အစညျးတှေ ဝိုငျးဝနျးကူညီပေးပါတယျ။
အဆငျ့လိုကျလညျး ကူညီနပေါတယျ။ ပုဂ်ဂလိက လုပျငနျးရှငျဖွဈတဲ့ ဦးဇျောဇျောဆိုလညျး ဒီအမှုနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ လုပျငနျးစဉျတှအေားလုံးကို သူပဲ ကခြံပေးနတောဖွဈပါတယျ။ အလားတူပဲ လှတျတျော ဥက်ကဋ်ဌ၊ ကိုယျစားလှယျတှေ ကိုယျတိုငျကိုက ….
ဒါကို သကျဆိုငျရာ ထိုငျးနိုငျငံ အကွီးအကဲမြားကို မတ်ေတာရပျခံစာတှေ ပေးပိုပွီးတော့မှ ဆောငျရှကျနပေါတယျ။ ဆောငျရှကျနဆေဲလညျးဖွဈပါတယျ။ ဆကျလကျပွီးတော့မှလညျး ဆောငျရှကျသှားမှာဖွဈပါတယျ”
အခုလို သဒေဏျပွဈဒဏျခမြှတျတာဟာ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ ဥပဒေ စညျးမဉျြးစညျးကမျးအရ ဖွဈတာကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့လညျး ဥပဒနေဲ့အညီ တငျပွပွီး သကျဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျသှားဖို့ လုပျဆောငျနတေယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
သဒေဏျကခြံနရေတဲ့ ကိုဇျောလငျးနဲ့ ကိုဝငျးဇျောထှနျးတို့ ပွဈဒဏျကနေ လှတျမွောကျဖို့ အတှကျ ဒီကနမှေ့ာပဲ ရနျကုနျမွို့ မွို့တျောခနျးမရှမှေ့ာ အမြိုးသားရေး တကျကွှလှုပျရှားသူတှကေ တောငျးဆိုကွပါတယျ။
သဒေဏျခမြှတျခံထားရတဲ့ မွနျမာလုပျသားနှဈဦးရဲ့ နောကျဆုံးအယူခံတငျသှငျးမှု ကိုတော့ ထိုငျးနိုငျငံအမွငျ့ဆုံးဗဟိုတရားရုံးခြုပျကနေ ပွီးခဲ့တဲ့သွဂုတျ ၂၉ရကျနကေ့ ပယျခခြဲ့ပွီး သဒေဏျကို အတညျပွုထားတာပါ။
အယူခံကို တရားရုံးကပယျခထြားတာကွောငျ့ နောကျဆုံးမြှျောလငျ့ခကျြအဖွဈ အသနားခံစာကို ရကျပေါငျး ၆၀ အတှငျး ထိုငျးဘုရငျဆီ မတ်ေတာရပျခံ တငျသှငျးရမှာ ဖွဈပါတယျ။အောငျကိုကိုလတျ(နပွေညျတျော)DVB
သေဒဏ်ကျခံ မြန်မာလူငယ် ၂ ဦးအတွက် မြန်မာအစိုးရက ထိုင်းဘုရင်ထံ မေတ္တာရပ်ခံမည်
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုကြောင့် သေဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား နှစ်ဦး လွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် ထိုင်းဘုရင်ထံ မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ အလုပ်သမား လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ပြောပါတယ်။
“ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်ဆီကို အသနားခံစာ တင်ပြဖို့ ရှိပါတယ်။ ထိုင်းမှာရှိတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကလည်း ဆောင်ရွက်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ သတ်မှတ်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ ရှိပါတယ်။”
ဒီနေ့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ အလုပ်သမားလူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ရုံးမှာကျင်းပတဲ့ အလုပ်သမားရေးရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေး အပြီး ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း လိပ်ကျွန်းမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၂ ဦး အသတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ‌သေဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ ကိုဇော်လင်းနဲ့ ကိုဝင်းဇော်ထွန်းတို့ လွတ်မြောက်ရေးအတွင် မြန်မာအစိုးရ အနေနဲ့ အရင်ကလည်း လုပ်ဆောင်ပေးနေသလို အခုလည်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ လည်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ပြောပါတယ်။
“စဖြစ်ကတည်းကိုက နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကိုယ်တိုင် ညွှန်ကြားချက်ရှိပါတယ်။ ဌာနကလည်းပဲ အလုပ်သမားသံအရာရှိတွေ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သံအမတ်ကြီးတွေ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အလုပ်သမားရေးရာ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးပါတယ်။
အဆင့်လိုက်လည်း ကူညီနေပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ ဦးဇော်ဇော်ဆိုလည်း ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးကို သူပဲ ကျခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကိုယ်တိုင်ကိုက ….
ဒါကို သက်ဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ အကြီးအကဲများကို မေတ္တာရပ်ခံစာတွေ ပေးပိုပြီးတော့မှ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဆောင်ရွက်နေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့မှလည်း ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”
အခုလို သေဒဏ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ ဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်း ဥပဒေနဲ့အညီ တင်ပြပြီး သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
သေဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ ကိုဇော်လင်းနဲ့ ကိုဝင်းဇော်ထွန်းတို့ ပြစ်ဒဏ်ကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် ဒီကနေ့မှာပဲ ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ အမျိုးသားရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက တောင်းဆိုကြပါတယ်။
သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦးရဲ့ နောက်ဆုံးအယူခံတင်သွင်းမှု ကိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံအမြင့်ဆုံးဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကနေ ပြီးခဲ့တဲ့သြဂုတ် ၂၉ရက်နေ့က ပယ်ချခဲ့ပြီး သေဒဏ်ကို အတည်ပြုထားတာပါ။
အယူခံကို တရားရုံးကပယ်ချထားတာကြောင့် နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်အဖြစ် အသနားခံစာကို ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ထိုင်းဘုရင်ဆီ မေတ္တာရပ်ခံ တင်သွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အောင်ကိုကိုလတ်(နေပြည်တော်) / DVB
အင်းယားကန်ဘောင်ပေါ်က ထီးသူခိုးတွေကိုမြင်တော့ အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုသွားသတိရမိလေရဲ့….
April 16, 2019 MM Live
ခန္တီးမြို့နယ် မှန်ပင်ကျေးရွာတွင် သြဂုတ် ၁၉ ရက် ည ၈ နာရီခန့်က ဘက်ထရီအိုး ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
August 26, 2018 MM Live News